त्रिभुवन विमानस्थलमा कस्को निर्देशनमा राखियो हजार यात्रु अट्ने कुर्सी ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
त्रिभुवन विमानस्थलमा कस्को निर्देशनमा राखियो हजार यात्रु अट्ने कुर्सी ?
काठमाडौं, २५ चैत । त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ १ हजार जना यात्रु अट्ने २ सय वटा नयाँ कुर्सी राखिएको छ । आकाशमा जहाज धेरैबेर होल्ड हुँदा विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा यात्रुको भिड जम्मा हुने गरेको छ । यात्रुले कुर्सी पनि नपाएको गुनासो गरेपछि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निर्देशनमा १ हजार जना यात्रु अट्ने २ सय वटा नयाँ कुर्सी राखिएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
सुरक्षा जाँच भैसकेर जहाज चढ्न ठिक्क परेका सयौं यात्रु उभिनु पर्ने अवस्था बाट मुक्त भएको प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनुभयो । कुर्सी पनि नहुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको यात्रुको गुनासो पछि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले यात्रुलाई सहज हुने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मन्त्री अधिकारीले आइतबार मात्रै आन्तरिक उडान कक्षतर्फ पनि २० दिनमा कम्तिमा १ सय कुर्सी राख्न निर्देशन दिनुभएको हो । अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक ४ सय उडान हुने गरेका छन । औसतमा २ मिनेट ४२ सेकेन्डमा उडान र अवतरण हुने गरेको छ । अधिकारीले गएको चैत १६ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको योजना अघि सार्नुभएको थियो ।
१८ बुँदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले सय दिनमा त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । यस्तै, एयर ट्राफिकमा देखिएको समस्या समाधान गरी विमानस्थललाई २१ घन्टा सञ्चालन गराउने अधिकारीको योजना रहेको छ ।